IsiFundo sokuSetyenziswa kweMithombo yeendaba esitsha sikhutshiwe | Martech Zone
Umthengi Uphononongo lokuSetyenziswa kweMithombo yeendaba eNtsha
NgoLwesibini, Oktobha 20, 2009 NgeCawa, ngo-Epreli 24, 2016 UAdam Omncinci
Isihloko ngale ntsasa kwi upapasho ndaba zekhampani Malunga ne-2009 Cone Consumer New Media Study efundeka ngoluhlobo, "Abasebenzisi abaThathu abaSebenzisi beMithombo yeendaba abaTsha baSebenzisana neeNkampani kunye neeBhanti ezikwi-Intanethi, enyuke ngama-32% ukusukela ngo-2008."
Ezi azizondaba zothusayo njengoko kukuqinisekiswa kwento thina bathengisi esele siyikholelwa ngokusengqiqweni. Ukuba ukwi-Intanethi, mhlawumbi ufuna ukunxibelelana neempawu ozithengayo ngandlela thile.
UMike Hollywood, umlawuli weCone kwimidiya entsha, ucatshulwe kolu papasho, “Kusekho ithuba lokuba iinkampani ezicingisisa phambili zenze ubukho kwaye zifumane ukhuphiswano. Ngokusekwe ekukhuleni konxibelelwano lomsebenzisi neenkampani, izigqibo ezingenakubalwa zokuthenga zichaphazeleka yimithombo yeendaba emitsha. Kunyanzelekile ukuba ukhwele kuba uloliwe sele emkile esikhululweni. ”
Amanye amanani akhankanyiweyo:
I-95% yabasebenzisi bemithombo yeendaba abatsha bakholelwa ukuba iinkampani / iimveliso kufuneka zibekhona kwimidiya entsha
I-89% ikholelwa ukuba iinkampani / iimveliso kufuneka zinxibelelane nabathengi
I-58% ifuna iinkampani / iimveliso kwiiwebhusayithi zemveli
I-45% ifuna iinkampani / iimveliso nge-imeyile
I-30% ifuna ukunxibelelana kwinethiwekhi yoluntu
I-24% ifuna ukunxibelelana ngemidlalo ekwi-intanethi
I-61% ivakalelwa kukuba iinkampani / iimveliso eziphambili ngokubaluleka kumajelo eendaba amatsha kufuneka zibe yingxaki yokusombulula kunye nokubonelela ngolwazi
Ndimele ndivume ukuba ngamanye amaxesha ndiziva ngathi ndiyinja endala. Yiyo loo nto ndigigitheka kancinci xa ndikhumbula ndibhalela ibhlog yetekhnoloji yentengiso. Kodwa njengomfundi wokuziphatha komntu, ndiyazi ukuba sonke sinezinto ezimbini esifana ngazo: Sinqwenela ukunxibelelana kwaye siyakuthanda ukwenza izinto ezintsha.
Kwaye ke, siza kuqhubeka ukukhangela iindlela ezintsha zokuthetha, ukubalisa amabali, nokwabelana ngolwazi. Ukuba, ntengiso ethandekayo, awusebenzisi la majelo matsha onxibelelwano njengoko evela kuba nje ucinga ukuba ziifashoni okanye ubuyatha obungenamsebenzi, ungothuki xa ushiyeka ngasemva, umile kwisikhululo sikaloliwe nabo bonke abanye abathengisi abajamelene nexesha elide abanqwenela ukuba bangavele banyathele unyawo olunye kuloliwe ohamba ngesantya esiphezulu.
Ukufunda ngakumbi malunga neemvakalelo zabathengi kuxanduva lweshishini kunye nemithombo yeendaba emitsha kunye nezizathu kunye nemithombo yeendaba emitsha, jonga Ukukhululwa kwiReuters okanye uye ngqo kwi Ukufunda ngaphandle.
tags: Isakhelo sokuthengisa umxholoSekela
Sebenzisa oopopayi kwiNtengiso ye-imeyile yakho
Okt 21, 2009 ngexesha 8:21 AM
Uziva njengenja endala, i-snap, bendihlala ndisebenza kumzi-mveliso wamalahle njengendoda eselula, ndisebenza emgodini- ndineminyaka engama-69 ubudala nditshintsha isiseko sam sezakhono ngoku ndisebenza kwintengiso ye-intanethi. Ngeendlela ezininzi bobabini babelana ngentambo efanayo 'ephembelela ukucinga'. Ndiyayithanda into yakho yokulinganisa ngololiwe okhawulezayo kwaye umntu okanye abantu abashiye isikhululo, inyusa ishishini ngokugqibeleleyo. Inye into endixakayo ngendlela izinto ezitshintsha ngokukhawuleza ndizibuza nje ukuba indawo esiya kuyo izakusisa phi sonke. Ngokumalunga neDape